Terms & Conditions | Royal Express Services Ltd.
တော်ဝင်အမြန်ချောပို့ မှ ချောစာ/ပစ္စည်း ပေးပို့သူများ လိုက်နာရန် အချက်များ
(၁) ပေးပို့လိုသည့် လိပ်စာတွင် လက်ခံမည့်သူ မရှိခြင်း ၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ လိပ်စာ မပြည်စုံခြင်း၊ လိပ်စာမှားယွင်းခြင်း များကြောင့် ပေးပို့နိင်ခြင်းမရှိပါက ချောစာ/ပစ္စည်း ပို့ခငွေ နှင့် အာမခံဝန်ဆောင်မှု ငွေအား ပြန်အမ်းခြင်းမရှိပါ။
(၂) စာရင်း သွင်းပြီိး ချောစာ၊ ပစ္စည်းများအား ငွေပြန်မအမ်းပါ။
(၃) အမည်မတူ၊ ရာထူး မတူသော စာများ၊ တင်ဒါနံပါတ် မတူသော စာများ အား စာတစ်အိတ် ထဲ အတွင်းထည့်ခွင့်မပြုပါ။
(၄) ပေးပို့သည့် စာများ ၊ ပစ္စည်းများ အတွက် စာရင်းသွင်းထားသော စာစောင် ၊ ပစ္စည်း အရေအတွက်ပေါ်တွင် ၀န်ဆောင်ခ နှူန်းတောင်းခံပါမည်။
(၅) ကျိုးပဲ့၊ ကွဲရှ၊ ပျက်စီးနိင်သော ပစ္စည်းများဧ။် ထုပ်ပိုးမူကို ပေးပို့ သူမှ တာဝန်ယူရပါမည်။ ကျိုးပဲ့၊ ကွဲရှ၊ ပျက်စီးသောပစ္စည်းများနှင့်ပေးပို့ရန်တားမြစ်ထားသော ပစ္စည်းများအပေါ်Royal Express Service မှတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
(၆) စွန်းထင်းနိင်သော၊ ပေကျံနိင်သော၊ အနံ့ပြင်းသော ပစ္စည်းများကို ပေးပို့ပါက ပစ္စည်းအပ်နှံစဉ်တွင် ကြိုတင်အသိပေးရပါမည်။
(၇) ပေးပို့သည့် ချောစာ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ကိစ္စ အားလုံးကို ပေးပို့သူက အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိပြိး၊ အလုံးစုံတာဝန်ယူရပါမည်။
(၈) ချောစာ၊ ပစ္စည်းများအား Royal Express အနေဖြင့် လိုအပ်ပါက လုံခြုံရေးအရ ဖွင့်ဖောက် စစ်ဆေးခြင်းကိုခွင့်ပြုရပါမည်။
(၉ ) စာထုပ်၊ ချောစာထုပ် အများ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးမှူများ အတွက် အများ ဆုံး လျော်ကြေးငွေသတ် မှတ်ချက်မှာ ကျပ်ငွေနှစ်သိန်းခွဲ (၂၅၀၀၀၀ိ/-) ဖြစ်သည်။
(၁၀) စာထုပ်၊ ချောစာထုပ်များဧ။် မူလတန်းဖိုးမှာ ငွေကျပ် နှစ်သိန်းခွဲထက် လျော့နည်းနေပါက မူလ တန်ဖိုးအတိုင်း ပေးလျော်ပါမည်။ လျော်ကြေးငွေ တောင်းခံသောအခါ မှတ်ပုံတင်ထားသော၊ စာရင်းသွင်းထားသော ချောစာ/ပစ္စည်း များဧ။်မူရင်းလက်ခံ ပြေစာအားတင်ပြနိင်ရမည်။
(၁၁) စာထုပ်၊ ချောစာထုပ်အများ အတွက် လျော်ကြေးငွေ အားမူရင်းလက်ခံပြောစာ နှင့်အတူ သတ်မှတ်ကာလ (၁) လအတွင်း လာရောက် တောင်းခံနိင်ပါသည်။ သတ်မှတ် ကာလ (၁) ထက်ကျော်လွန်ပါက လျော်ကြေးငွေ အားပြန်မအမ်းပါ။
Royal Express’s Terms & Conditions for the Customer
1. There will be no refund and guarantee service fees, if sender stated address have no contactable person to accept the delivery or changing of the location, incorrect address and incomplete address.
2. There will be no refund for the recorded letters or parcels.
3. Different name, different designation or different tender number documents are not allowed to put in one envelope.
4. Service fees are based on the number of recorded or registered letters or parcels that sender is going to send.
5. Sender has liability for the fragile items packaging. Royal Express is not responsible for the damage of those fragile items and unacceptable shipments.
6. Sender must declare for the item that is easy to stain or item that is strong in smell before the consignor sends.
7. Sender has totally obligation for the letter or parcel in case of ownership disputes or legal issues.
8. Royal Express has right to open the parcel or letter in case of security purposes.
9. Royal Express is liable to refund maximum amount of 250,000 Kyats for the package loss or damage.
10. If the package original price is less than 250,000 Kyats Royal Express will refund the full amount. Royal Express’s responsibilities and guarantee service fees cover for the registered letters, parcels, original waybill or cargo receive submitted by sender.
11. All the claims for the loss and damage must be submitted or reported to Royal Express withinamonth with original waybill or cargo receive. Royal Express is not liable for the claim if the claim is more thanamonth.
It is unacceptable shipment such as illegal items, dangerous, explosives or flammable goods, weapons, and ammunition.
It is not permitted if the shipment encloses money, item equivalent with money, lottery ticket, gold, damageable items and game stone.